Fitbit dia manolotra ny karazany vaovao azo ampiasaina | Vaovao IPhone
FitBit dia manolotra ny karazany vaovao azo ampiasaina, ao anatin'izany ny fiambenana GPS
Nacho | | Fitaovana IPhone
Fitbit dia iray amin'ireo mpisava lalana eo amin'ny tontolon'ny fitafiana azo ampiasaina ary namela ny orinasa hahazo traikefa amin'ny sehatra iray izay miroborobo. Porofon'izany ireo fitaovana vaovao azo ovaina natolotr'izy ireo ary ahitantsika ny bracelet roa sy famantaranandro misy GPS, mamaly ny anaran'ny varotra Fandefasana, famandrihanaHR ary fiakarana.
Miaraka amin'ireo vokatra vaovao ireo dia maniry ny FitBit manarona ny filan'ny mpampiasa tsirairay avy Ary na dia misy aza ireo izay mipetrapetraka amin'ny bracelet izay manara-maso ny dingana sy ny torimaso, misy ihany koa ny vahoaka be fangatahana izay mila manoratra ny tahan'ny fony na ny lalana fanaon'izy ireo manao fanatanjahan-tena matetika.
1 FitBit Charge sy Charge HR
2 FitBit Surge
FitBit Charge sy Charge HR
fehin-tanana FitBit Charge Izy io dia fivoarana voajanahary tamin'ny taranaka teo alohan'ity vokatra ity, fampitaovana azy amin'ny bateria izay maharitra fito andro ary endrika kely novaina. Amin'ny maha-azo anaovana azy tsara, ny FitBit Charge vaovao dia hanoratra ireo dingana nataontsika, ny gorodona nianika, ny halaviran-dalana ary ny kaloria nodorana. Ny torimaso koa dia voarakitra ho azy, tsy mila miditra "mode matory" amin'ny fehin-tànana toy ny tranga misy amin'ireo vokatra mifaninana hafa.
Ny angona rehetra izay raketin'ny fehin-tànana FitBit Charge dia azo jerena amin'ny alalanao Fampisehoana OLED fanjifàna ambany izay azo vakiana tsara any ivelany koa. Ity efijery ity dia hampiseho fampandrenesana vitsivitsy avy amin'ny iPhone ihany koa toa ny famantarana ny olona miantso antsika, zavatra iray izay miaraka amina fampandrenesana mihetsiketsika ihany koa.
Mazava ho azy, ny FitBit Charge dia tsy tantera-drano ary vidiny amin'ny $ 130.
Raha matetika isika no manao fanatanjahan-tena matetika dia azo antoka fa liana amin'ilay kinova kokoa isika Ampamoaho HR amin'ity bracelet ity izay ankoatry ny voalaza etsy ambony, dia manolotra a sensor amin'ny tahan'ny fo natambatra izay misoratra anarana tsy tapaka momba ny fitepon'ny fony.
Amin'ity tranga ity, mihena ny dimy andro ny bateria ary miakatra hatramin'ny XNUMX. ny vidiny $ 149,95. Ny FitBit Charge HR dia ho hita mandritra ny volana voalohan'ny 2015.
Raha mila zavatra feno kokoa aza isika, ny FitBit Surge dia lasa vahaolana mety indrindra ho an'ireo mitaky be indrindra. Izy io dia famantaranandro mifantoka amin'ny fampiharana ara-panatanjahantena mampiditra a Mpandray GPS, zavatra ahafahanao manara-maso ny toerana misy anay amin'ny làlana iray ary manisa ny halavirana na ny hafainganam-pandeha amin'ny marimarina kokoa. Ny FitBit Surge dia manana fantsom-pandrefesana marobe hahatonga azy io ho vokatra tena feno: accelerometer telo-axis, gyroscope, kompas, sensor light ambient, mpandray GPS ary monitor ny tahan'ny fo.
Ny FitBit Surge koa dia hanana toetra mampiavaka ny famantaranandro, mamela antsika hahafantatra hoe rahoviana isika no manana antso na fehezo ny famerenana mozika avy amin'ny famantaranandro mihitsy.
Ny tsara indrindra angamba, ny FitBit Surge dia manana bateria mampanantena a fahaleovan-tena hatramin'ny fito andro, zava-bita tokoa raha jerena ny fahafaha-manao sy ny fifandraisana misy reharehany. Ilaina ny mijery eo ambanin'ny toe-piainana manao ahoana ny herinandron'ny bateria, fa ny priori, amin'ny taratasy dia toa maharesy io fizarana io izay mampiato matetika ny ankamaroan'ny fitaovana.
Averina indray, ny FitBit Surge dia ho hita mandritra ny volana voalohan'ny 2015 na dia ho an'ny Dolara 249,95.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » FitBit dia manolotra ny karazany vaovao azo ampiasaina, ao anatin'izany ny fiambenana GPS
Yansito02 dia hoy izy:
Tiako ny endriny sy ny fiasany, tena io no ilaiko, maharary fa tsy ho amin'ny 2015
Valiny amin'i Yansito02
sa dia hoy izy:
Novidiko ny fehin-tànana momba ny hetsika Fitbit ary tamin'ny fotoana mety. Tao anatin'ny enim-bolana latsaka dia voatery nanova izany indroa izy ireo ary mbola tsy mandeha tsara, efa avelako ho tsy azo atao izany. Ka raha ity vokatra vaovao ity dia toy ny fihenan'ny loza voajanahary, tsy maintsy jerenao fotsiny ireo forum mba hahitanao ny fiheveran'ny mpampiasa azy.
Mamaly an'i sa
Data Widget, fehezo ny fandanianao angona avy amin'ny Notification Center
Wunderlist, mpitantana asa feno sy tsotra ary maimaimpoana